एउटा अक्सिजन सिलेण्डरबाट पाँच जनाको उपचार | Mechikali Daily
Posted By: रमेश पराजुलीon: २४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १८:५४
कपिलवस्तु, वैशाख २४ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कपिलवस्तु अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । बिरामी राख्ने बेड नभएपछि भुईंमा राखेर बिरामीहरुलाई उपचार गरिरहेको छ । एउटा अक्सिजन सिलेण्डरबाट पाँच जना बिरामीहरुको उपचार भैरहेको छ । कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालममा रहेका बेडहरु भरि भराउ भएपछि बिरामीहरुलाई भुईंमा राखेर उपचार गर्न बाध्य भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका अनुसार ईमरजेन्सी शाखामा रहेको ८ वटा बेड कोरोना संक्रमितले भरिएका छन् । जिल्लामा संक्रमितहरुको संख्या थपिँदै गएपछि अस्पतालकै भुईंमा राखेर उपचार गर्न बाध्य भएको कपिलबस्तु अस्पत्तालका क्लिनिकल कोडिनेटर डा. गणेश क्षेत्रीले जानकारी दिए । कपिलवस्तु अस्पत्तालको मातहतको अस्थायी कोरोना अस्पतालमा रहेको २२ बेड पनि संक्रमति बिरामीहरुले भरिएका छन् । अक्सिजन लगायतका सामाग्री तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावले यतीखेर उपचारमा समस्या आएको छ । कपिलबस्तु अस्पत्तालको आईसियुमा १० जना कोरोना पोजेटिभ बाहेकका अन्य बिरामीहरुको उपचार भैरहेको छ । धेरै बिररामीहरुको अहिले अस्पत्तालको भुईमा उपचार भैरहेको छ । बिरामीहरुको चापबढी भएपछि अक्सिजनको अभाव भएको क्लिनिकल कोडिनेटर डा. क्षेत्रीले जनाए ।
यस्तै अस्पत्तालले सीमित साधन र स्रोतको भरमा पनि बिरामीहरुलाई सक्दो सेवा दिईरहेको छ । बिरामीको संख्या बढेपछि सहज रुपमा उपचार गर्न नसकिएको कपिलबस्तु अस्पतालका मेसु डा. किशोर बन्जाडेले जानकारी दिए । अहिले अक्सिजन र औषधी मात्रै चाहिने संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ समेत अस्पतालमा नभएको उनले बताए । यस परिस्थितीमा कोरोना संक्रमित बढ्नुका साथै मृत्युदर समेत बढदै गएकोमा दुःख ब्यक्त समेत गरेका छन् । यस अस्पत्तालमा बिरामीहरुको चाप बढ्दै गएपछि अक्सिजन पु¥याउन मुश्किल परेको छ । एउटा अक्सिजनबाट पाँच जना बिरामीहरुलाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्नु परेको अस्पत्तालका ब्यबस्थापक रत्नाकर शुक्लाले बताए । त्यो अक्सिजन पनि पहिले आउने बिरामीले मात्र पाएका छन् पछि आउने बिरामीहरु त्यत्तीकै छट्पटि रहेका छन् । स्थानियतहले पिसिआर जाँचका लागि ०७७ सालमा सहयोग गर्ने भनेकोमा कपिलबस्तु नगरपालिका बाहेक अन्य ९ स्थानियतहले अहिले सम्म केही सहयोग नगरेको समेत जानकारी दिए ।
अहिले सम्म यस अस्पत्तालले एक जनाको पिसिआर गर्दा रु. ३ सय रुपैया घाटा सहेर गरिरहेको छ । अब भोली देखि पिसिआर जाँच गर्ने ल्यावलाई आर्थिक नभएका कारण बन्द गर्ने अवस्था आएको ब्यबस्थापक शुक्लाले बताए । जसरी कपिलबस्तु नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ त्यसरी नै अन्य स्थानियतहहरुले जिल्लाको एक मात्र सेवासुबिधा भएको कपिलबस्तु अस्पत्ताललाई सहयोग गरिदिने हो भने अस्पत्तालको ब्यबस्थापनलाई फराकिलो बनाउन सकिने छ । बिरामीहरुले सहजता पुर्बक उपचार गराउने थिए, जिल्लाका बिरामीहरुलाई अस्पत्तालमा भर्ना लिदैनौ भन्न मिल्दैन तर स्थानियतहले यस्तो परिस्थितीमा बुझ्न जरुरी छ यस अस्पत्तालमा जनशक्तिको समेत अभाव रहेको छ आर्थिकको व्यवस्था हुने हो भने अस्पतालले आवश्यक अनुसारको जनशक्ति तयार गर्ने छ भन्दै कपिलवस्तु अस्पताल समितीले मानवीय क्षती नहोस भन्दै स्थानिय सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।